नयाँ दैनिक | विद्यार्थी नेताको चिन्ता : हलो जोत्न कोही तयार छैन ! विद्यार्थी नेताको चिन्ता : हलो जोत्न कोही तयार छैन ! – नयाँ दैनिक
माघ ३, काठमाडौँ । विद्यार्थी नेता नरेश रेग्मीले कृषिमा नयाँ पुस्ताको चासो नगएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । खेत बाँझो राख्नेलाई तीन लाख जरिवाना त के फाँसीकै सजाय तोके पनि अझै हिजोआजका पुस्ता कृषि पेशा तयार हुने नदेखिएकोमा रेग्मीको चिन्ता हो । ‘यो देश कृषि प्रधान देश हो भनेर जति नै रटान रटाए पनि आजको ठूलो हिस्सा हलो जोत्न वा ट्र्याक्टर चलाउन तयार हुने सम्भावना छैन ।’ सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, ‘हिजो देखि नै कृषिको अपमान गरिँदै आइयो।कृषक हुनुलाई अपमानित हुने पेशा मानियो । त्यसैले आज पनि हरकोहीका आमाबालाई घरमा कृषक होइन डाक्टर चाहिएको छ। छोराले पढेन भने हलो जोत्ने हुन्छ कि भन्ने आम चिन्ता छ आज पनि। छोरीलाई त झन घरमा बन्धक बनाइयो ।’
सत्तारुढ नेकपा निकट अखिल (क्रान्तिकारी)का केन्द्रीय सचिव रेग्मीको चिन्ता छ, ‘जमीनदारहरुसँग खेत छन् तर उनीहरु आफैँ जोत्न तयार छैनन किनकी लाज हुन्छ ।’ किसानका छोराहरु किसान बन्नु भन्दा खाडीमा काम गर्दा सम्मानित भएको महसुस गर्ने उनको बुझाई छ । खेत किन बाँझा छन् भन्ने समस्याको जरा पत्ता नलगाएसम्म खेतमा हरियाली छाउन नसक्ने उनले तर्क गरे । जातीय आधारले गरिएको श्रम विभाजनको परिणामले यस्तो भएको उनको दावी छ ।
‘पहिला सानै देखि डाक्टर हुनु, मजदुर हुनु, किसान हुनु सबै आआफ्नो ठाउँमा राम्रा पेशा हुन् भनेर घरघरमा पढाउ। स्कुल स्कुलमा सिकाउ कि कृषक हुनुमा कुनै हीनताबोध महसुस गर्नु पर्दैन । अनि मात्र समाज खेततिर फर्किन्छ । होइनभने मृत्युदण्ड नै घोषणा गरे पनि समाज हलो जोत्न तयार हुनेवाला छैन ।’ उनले लेखेका छन् ।